Thursday June 01, 2017 - 13:44:40 in Wararka by Super Admin
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegtay in 13 Askari oo ka mid ahaa Ciidamada Meliteriga inay ku dhinteen Shilkaasi, kaas oo lagu tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah shilalkii ugu xumaa ee dhawaanahan soo mara diyaaradaha Meliteriga ee dalkaasi.
Gudoomiyaha Gobolka Sharnaaq ayaa Bayaan uu soo saaray waxa uu sheegay in diyaaradda ay bur burtay Seddax daqiiqo kadib markii ay duushay garoon ay Ciidamadu leeyihiin,waxaana uu tilmaamay in diyaaradda ay bur burtay kadib markii si kedis ah ugu dhacday Xarko korontada qaada oo ay dul mareysay.
Gawaarida gurmadka deg deggga ee Ciidamada Meliteriga ee Turkiga ayaa gaaray goobta ay diyaaraddu kusoo dhacday. Wakaaladda Wararka ee Doogan ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa sheegtay in Dowladdu ay halkaas u dirtay kooxo qaabilsan dhinaca baaritaannada, si ay usoo hubiyaan sababta ka dambeysa bur burka diyaaradda.
Dhinaca kalena, Seddax Askari oo ka tirsan Ciidamada Meliteriga dalka Turkiga, iyo laba ka tirsan Kooxaha Mucaaradka ee hubeysan ee loo yaqaano PKK ayaa dhintay, kadib markii ay iska hor imaadyo ay ka dhaceen deegaanno hoos taga Gobolka Diyaar Bakar ee kuyaalla Koonfurta Bari ee dalkaasi, iyadoona Ciidamada Melteriga ee Turkigu ay maalmihii lasoo dhaafay ay howl-gallo ka wadeen gobolkaasi.
Ciidamada Dowladda Turkiga ayaa maalintii Talaadada waxay qaadeen howl-gal ballaaran oo ay ka sameynayaan inkabadan 60 deegaan oo hoostaga Gobolka Diyaar-Bakar, halkaas oo loo maleynayo inay saldhigyo ku leeyihiin Kooxaha Kurdiyiinta ee loo yaqaano PKK, kuwaas oo dagaal xooggan kula jira Xukuumadda Ankara.